Qiso dhab ah, wasiirkii la budheeyey iyo arrinka masuuliyinta wadani ee xidhan isu eeka - KALA SOCO - Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. | KALA SOCO – Wargeysyada ugu fiican ee Soomaalida ah ee bixiya warka ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan.
Qiso dhab ah, wasiirkii la budheeyey iyo arrinka masuuliyinta wadani ee xidhan isu eeka
November 25, 2019 10:24 PM - Written by Warbaahinta AlloolNews
______________Qiso dhab ah_____________
Dalka Georgia ee qaarada yurub, ayaa berigii ay kasoo baxayn sofiyaadkii ruushki burburey, ayaa sharciga dawliga ah ayey masuuliyiinta qaranku aad ugu tuman jireyn.
Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa wasiir jeclaa cebitanka kofiga ama bunka ayaa meel aan ka fogeyn xafiiskiisa waxa laga furey meherad cusub oo bun fiicaan lagunsheegay.
Subaxi danbe ayuu ilaaladiisi u sheegay in ay geeyan meheradi, wuu tegay nin linekii ama kiyuugi ka horeeyey ayuu ku yidhi iiga bax, ninkii wuu diidey, war miyanad igaranayn buu yidhi haa lakiin halkani waa meheradi bunko nina loogama baxo. Ilaaladisi ayuu u yeedhay oo ninkii xidha buu yidhi.
Iska soo wareegtay oo ninkiina lasoo daa dawladiina wey duntay, labadi nin oo shicib wada ah ayaa meheradi bunka isugu yimi halkii ayaa wasiirkii budh lala korey markii leesugu yimi budhkii maxkamad ayaa leesla galay.
Garsoorihi markii uu dhegaystay sababta keentay dagaalka wuxuu xukumay in ninkan wax budheeyey la sii daayo sababto ah in uu magdhaw oo intii uu bila sharciga ku xidhnaa iyo budhkaan leeysu tuuro.
Tolow maanta haddi masuul dawlada somalida ka tirsan arrinkan ku dhici laha maxaa dhici lahaa.
Qalinkii siciid sanweyne